I-Anabelle Residence @ Marina Unit 426 - I-Airbnb
I-Anabelle Residence @ Marina Unit 426
Dumaguete, Central Visayas, i-Philippines
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Rany
U-Rany unokuphawula okungu-234 kwezinye izindawo.
I-Marina Condominium iyimizuzu engu-8 nje yokushayela ukuya esikhumulweni sezindiza, imizuzu emi-5 ukushayela ukuya eDumaguete Port naseSiliman University. Yimpambano yomgwaqo eya endaweni yokudlela Edumile, ibhendi ebukhoma, indawo yokuzivocavoca ye-Karaoke kanye nendlu ye-disco.
ISItifiketi Sezokwelashwa, i-ID yoqobo evumelekile kanye nekhophi ye-Xerox yesivakashi ngasinye kuyadingeka lapho singena, uma usuka e-Dumaguete City Barangay Clearance izokwenza kanjalo kanye ne-ID esebenzayo. Isitifiketi kufanele kube udaba oluvumelekile lwesonto elilodwa ngaphambi kwedethi yokungena. Ukukhansela kuyiseluleko uma ungakwazi ukunikeza lokhu
Kwakuyi-Metropolis Motiff evame ukubizwa ngokuthi i-Timeless design ezohambisana nokunambitheka kwawo wonke umuntu, ukuklama i-pax engu-7 enefenisha ephelele, izitsha zasekhishini eziphelele ukuze ukwazi ukupheka, wonke amakamelo abe ne-wifi yamahhala enesiphephethisi, ikhebula, ne-shower eshisayo. Le-condo inendawo yayo yokomisa izingubo ezimanzi phezulu ophahleni.
ubusuku obungu-7 e- Dumaguete
Umakhelwane wami ukuphila kobusuku obungcono kakhulu edolobheni, i-Malehay (ibhendi ebukhoma), i-Lab As, i-Lantaw, i-Cafe Racer, i-Ever (i-Karaoke) nokunye okuningi futhi kuhamba emgwaqweni.
I always wanted to be with my Wife an…
Ngizotholakala ngokuthumela imiyalezo futhi abasebenzi Bami bakhona ukukusiza.
Hlola ezinye izinketho ezise- Dumaguete namaphethelo